China YASKAWA Zenzekelayo welding irobhothi AR1440 mveliso kunye nabenzi | Jiesheng
Zenzekelayo Welding Robot Inkcazo:
Zenzekelayo ukuwelda irobhothi AR1440, Ngokuchaneka okuphezulu, ngesantya esiphezulu, umsebenzi ophantsi wokusasaza, iiyure ezingama-24 zokusebenza okuqhubekayo, kufanelekile ukuwelda ngentsimbi yentsimbi, intsimbi engenasici, iphepha elihlanganisiweyo, i-aluminium alloy kunye nezinye izinto, ezisetyenziswa ngokubanzi kwiindawo ezahlukeneyo zemoto, ifenitshala yesinyithi, izixhobo zomzimba, oomatshini bobunjineli kunye nezinye iiprojekthi zokuwelda. ,
Iirobhothi ezizenzekelayo zeMOTOMAN-AR1440 zinomthwalo omkhulu we-12Kg kunye noluhlu oluphezulu lwe-1440mm. Ukusetyenziswa kwayo okuphambili yi-arc welding, i-laser processing, ukuphatha, kunye nabanye. Isantya sayo siphezulu ukuya kuthi ga kwi-15% ephezulu kuneemodeli ezikhoyo!
Iinkcukacha zobugcisa ze Zenzekelayo Welding Robot :
6 12Kg Ubungakanani: ± 0.02mm
130Kg 1.5kVA 260 ° / umzuzwana 230 ° / umzuzwana
260 ° / umzuzwana 470 ° / umzuzwana 470 ° / umzuzwana 700 ° / umzuzwana
Unokwakha indawo yokusebenza yeerobhothi yokuwelda iinxalenye ezinde (iinxalenye zeemoto, njl.). Ngokudityaniswa kwee-Y ezimbiniaskawa MOTOMAN iirobhothi kunye ne-WOTPOS positioner positioner, i-welding ehambelanayo ye-shafts shafts ingenziwa. Umgangatho ophezulu we-welding osebenza kakuhle kwimveliso unokufezekiswa naxa ukuwelda iinxalenye ezinde.
Unokwenza kwakhona ukuwelda okusebenzayo ngokusebenza okulungelelanisiweyo kweerobhothi ezi-3 ze-YASkawa MOTOMAN. Iirobhothi ezimbini zokuphatha zibambe indawo yokusebenza kwaye zihamba kweyona ndawo ifanelekileyo yokuwelda. Kwindawo efanelekileyo yokunyusa, ukuqinisekisa umgangatho we-welding ozinzileyo. Emva kokuba i-welding igqityiwe, iirobhothi ziqhuba ngokuthe ngqo ukuphatha, ezinokwenza lula isixhobo sokuphatha.
Egqithileyo YASKAWA laser iwelding irobhothi MOTOMAN-AR900
Okulandelayo: I-Yaskawa arc welding robot AR2010
Ukuphatha ingalo yeRobot, Ukuphathwa kweMizi-mveliso yeRobhothi, Iinkqubo zokuphatha izixhobo zeRobotic, Ukuphathwa kweRobothi yeAxis, Ukuphathwa kweRobhothi ngokuzenzekelayo, Ukuphathwa kweRobhothi ngokuzenzekelayo,